मातृभाषामा बालसाहित्य विषयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न
राष्ट्रिय बालदिवस २०७० का अवसरमा मातृभाषामा बालसाहित्य विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कुपन्डोल, ललितपुरमा रहेको सातोआकी भवनको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रम नेपाल बालसाहित्य समाज, इलोह प्रकाशन र बालसंसार प्रा. लि. को संयुक्त आयोजनामा भएको थियो ।
दृष्टिविहिन बालिकाको आवाज
लेब्रोटरी स्कुलमा कक्षा १० मा पढ्ने सरिता अधिकारी भन्छिन्– हामीलाई जीवनमा व्यवहारिक ज्ञानका हिसावले काम लाग्ने जति मात्र गणित विषय पढाइयोस् । गणित विषय नै पढेर जाँच दिई उतीर्ण हुनैपर्ने बाध्यता हामी दृष्टिविहिनका लागि अत्यन्त दुःखको विषय हो । यसमा सरोकारवालाहरुको ध्यान पुगोस् ।
आवाज सुनाउने दिवसमा आवाज सुनाउन नै महँगो शुल्क तिर्नु परे पछि ...
आवाज सुनौं भन्ने मूल नारा रहेको यस वर्षको बालदिवसमा आवाज सुनाउन नै हरेक प्रतियोगितामा शुल्क तिर्नुपरेकोले सहभागिताको संख्यामा पनि असर परेको कुरा एक कर्मचारी बताउँछन् । उनी नाम नछापिदिनु है भन्दै भन्छन् – यस वर्ष सहभागिता एकदमै कम भएको छ । कविता प्रतियोगितामा सहभागिताको आकर्षण राम्रो हुन्थ्यो । तर यो पटक दशवटा विद्यालय मात्र सहभागि भए । यो प्रतियोगितामा पहिला धेरै बालबालिका सहभागी हुन्थे ।
she has established are ‘Goma Memorial Award’ through Women Literature’s Foundation, ‘Devkumari Thapa Children’s Literature Banita Award,’ ‘Gunjan Talent Award,’ ‘Bandipur Children’s Literature Award,’ ‘Govinda Bahadur Malla Gothale Young Adults’ Literature Manuscript Award’ etc. With royalties for her writings, she has also established ‘Jaleshwori Children’s Talent Award’ at the initiative of her daughter Nibha Shrestha.
ब्राइट फ्युचरकी छात्रा हिरोइन
शिक्षा दिने शिक्षकको कथालाई पर्दामा उतार्न थालिएको नेपाली चलचित्र टिचरमा ब्राइट फ्युचर माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा सलिना बस्नेत हिरोइन हुने भएकी छिन् । उनका पिता वरिष्ठ निर्देशक शोभित बस्नेतले निर्देशन गर्ने यो चलचित्रमा उनले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्न लागेकी हुन् । यस अघि उनले थुप्रै चलचित्रमा बालकलाकारको भूमिकामा अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
सन् १३३७ र १४५३ का बीच बेलायत र फ्रान्सका बीचमा अनेक छोटा छोटा युद्धहरू भए । यी युद्धहरूलाई सामूहिक रुपमा “सयवर्षे युद्धहरू भनिन्छ । बेलायतीहरूले पटक पटक फ्रान्सको सत्तालाई कब्जा गर्ने कोसिस गरिरहे । तर फ्रान्सेलीहरूले त्यसको प्रतिकार गरि नै रहे । १४१५ मा बेलायती राजा हेनरी पाचौंले फ्रान्समाथि जबरजस्त आक्रमण गरेर एजिनकोर्ट युद्ध जितेर फ्रान्सलाई आफ्नो अधिनमा ल्याए ।
प्रयास नेपालमा कथावाचन
बालबालिकाको संरक्षण र बाअधिकारको प्रवर्धनका लागि क्रियाशील सामाजिक संस्था प्रयास नेपाल अनाथालयमा आश्रित बालबालिका माझमा बालबालिकाका लागि साहित्य लेख्ने लेखक कार्तिकेयले कथावाचन गर्नु भएको छ ।
‘बालबालिकाको सिर्जनात्मक विकासमा योगदान दिनु कोषको मुख्य काम हो’
मोहन कार्की कार्तिकेय बालप्रतिभा पुरस्कार कोषका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विगत दश वर्षदेखि बालप्रतिभाको प्रवर्धनका लागि समर्पित यस कोषको स्थापना, कार्यक्रम र उद्देश्यवारे उहाँसँग गरिएको कुराकानी यस अंकमा हामीले प्रस्तुत गरिएको छ ।
लिटिल मिस वल्र्ड विपश्वी पौडेल के भन्छिन् ?
मेरो मनपर्ने ठाउँ स्तानबुलको समुद्रको किनार र नेपालमा पोखरा हो । मलाई मनपर्ने लेखक विलियम ब्लेव र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन् । भविष्यमा मलाई अन्तरिक्ष यात्री बन्ने इच्छा छ । मेरो लक्ष्य पनि त्यही हो । डाक्टर बन्न मलाई मन छैन ।
दृष्टिविहिन दुई बालप्रतिभाहरुसँग गरिएको कुराकानी
सरिता अधिकारी कक्षा १० मा पढ्छिन् । उनी आँखा देख्दिनन् । ब्रेल लिपीबाट पढ्छिन् । काठमाडौं कीर्तिपुरको ल्याब्रोटरी स्कुलमा पढ्ने उनी एकदमै सुरिलो स्वरमा गीत गाउन सिपालु प्रतिभा हुन् । उनले वि.सं. २०६८ भदौ २९ गते राष्ट्रिय बालदिवसका अवसरमा नेपाल बाल संगठनले आयोजना गरेको बालगीत प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार जितेकी थिइन् ।